Omnye unyaka, elinye ibali elibalulekileyo, elinye amava amangalisayo… Ibiyi-YII2019 le kum! -Geofumadas
Ikhaya/ezintsha/Omnye unyaka, elinye ibali elibalulekileyo, elinye amava amangalisayo… Ibiyi-YII2019 le kum!
Xa ndaxelelwa ukuba ndiza kuba nelinye ithuba lokuba yinxalenye yesona siganeko sikhulu se-Infrastructure enyakeni, oko kwandenza ndakhwaza ngovuyo. I-YII2018 eLondon, ngaphaya kokuba yenye yeendawo endizithandayo kwiholide, yayingamava amangalisayo kunye nodliwano-ndlebe olukhethekileyo kunye nabaphathi abaphezulu be-Bentley Systems, i-Topcon kunye nabanye, iintetho eziguqukayo kunye neeseshoni ezinolwazi kakhulu. I-Bentley Systems iye yavuselela ingcamango "ye-digital twins" kwaye yeyiphi indlela engcono yokubona i-revolution kwishishini lokwakha kunokuba kunye nabenzi ngokwabo. I-mecca yeziseko zophuhliso ibihlanganise iinkokeli zengcinga eziphuma phantse kuwo onke amashishini kwaye ukwabelana ngolwazi, uthungelwano kunye nentsebenziswano ebiqhubeka ibingavakali.
Ndikwindawo elungileyo ukuvuselela uthando lwam lokubhala malunga nomzi mveliso wokwakha. Ukusuka kwiiDigital Advance Academies ukusebenzisa iimeko, bendifuna ukubamba yonke into kwimemori yam kwaye emva koko ndiyiguqulele kwibali elahlukileyo. Ndizele lulwazi, kanye emva, ndikwazile ukwenza ukubhala okubhaliweyo okunyanzelayo kubafundi bam. Umnqweno wokudibana nabakhweli beshishini lokwakha kunyaka olandelayo wawusaphila kwaye, ngakumbi ngakumbi kuba iSingapore isondele kakhulu ekhaya. Ngeeyure ezi-5 kunye nemizuzu engama-55 yexesha lokuhamba, andinakuphoswa!
Ifike ngo-Okthobha i-20, i-2019 kwaye bendikwiMarina BaySands entle, eSingapore. Xa ndandijonga indawo yabo echibini lokuPhahla elingaphantsi, umdla wam waphindaphindeka. Ngummangaliso wokwakha ngokwawo, njenge dolophu encinci eneevenkile ezinkulu, iziko lemiboniso, iklabhu yasebusuku, ikhasino, inkundla yokutya kunye nokunye ...
Ixesha elide elilindelwe le-YII2019 Usuku lweMithombo yeendaba lwaqala ngentsasa entle ka-Oktobha 21. Inkomfa yemithombo yeendaba inike amandla iindaba ezibalulekileyo ezinje:
Iinkqubo ze-Bentley kunye neNkqubo yokuBekwa kweTopcon kuvelisa indibaniselwano yabo yokwakha idigital.
Iinkqubo ze-Bentley zokomeleza izixhobo zeDijithali ezibonelela ngokufumana ii-Citilabs kunye netekhnoloji ye-orospatial orbit.
Umsebenzi Wokwakha wedijithali ukwazisa abahlali kunye nentsebenziswano kunye ne-O3 Solutions ukuxhasa iinkonzo eziphambili zokupakisha umsebenzi.
IGeofumadas iye kulo msitho iminyaka eli-11 ilandelelana, kwimeko yam lixesha lesibini kwaye okokuqala njengenxalenye yemagazini iTwinGeo / Geofumadas. Udliwanondlebe olukhawulezileyo nabaphathi abaphezulu kwiiNkqubo zeBentley yayingamava avuyisayo andisa ulwazi lwam ngamawele edijithali, ubunjineli bejeotechnical, ubunjineli bezakhiwo, izixeko ezidijithali nokunye okuninzi ...
Ukunxibelelana, ukunxibelelana nabahlobo bakudala nabatsha ngexesha lesidlo sasemini kunye neti sekhefu kwenziwa ngalo lonke ixesha ukonwaba; Ndayithimba ngokoqobo intsingiselo yosuku kwi-tweet eya ekubeni idume ngokuthandwayo.
Ndilapha ndonwabela ukuvela kwemizuzu yonke .. unyaka wesibini ngamava afanayo anomdla ☺️ #YII2019 @BentleySystems @GolgiAlvarez @christinebyrne pic.twitter.com/dNfIUrn82K
-USIMONTI PAUL (@shimontipaul) Oktobha 21, 2019
Usuku oludluleyo lwafikelela esiphelweni ngesidlo sangokuhlwa esimnandi esilungiselelwe kwiClifford Pier enomdla kwiFullerton Bay Hotel.
Kwiintsuku ezilandelayo, ngo-Okthobha 22, 23 kunye no-24 ngokusebenzisa iiseshoni ezinomdla zokuKhawulezisa, iifutshane zeshishini, zindincedile ndangena kwilizwe lamaDijithali. Ndisoloko ndizimisele ekwazini ukuba zisetyenziswa njani izinto kunye nokuqhuba utshintsho kwihlabathi lokwenyani, iimeko zokusetyenziswa kunye neenkcazo-ntetho zokugqibela zandigcina ndibambekile. Ubusuku be-YII-Awards ngobusuku bayo kunye nokuncuma kufuna ukukhankanywa okhethekileyo.
Ezona zibhengezo ziphambili zenziwe kulo msitho zezi:
Iinkqubo ze-900 zazisa ngeeAseWW Digital Twin Services kunye neeNkonzo eziVulekileyo zoMbane zeDijithali yeeaseti kunye nenethiwekhi.
Iklasi yaKho yaazisa umbutho wekharityhulamu yesikolo kunye neeNkqubo zePortugal.
Iinkqubo ze-XNUMX zijoyine njengelungu lehlabathi-yazisa ngenkxaso ye-IFC yamawele edijithali.
Iinkqubo ze-900 zazisa ngeenkonzo ezintsha zelifu le-iTwin ukulungiselela ubunjineli bamawele edijithali.
By UShimonti Paul, UMhleli Wokubonisana, TwinGeo
Amanani akhethekileyo e-ESRI oomasipala